21.5 inch Ezi Flat Touch Signage - China Chengdu Zenghong Sci-Tech
Ọha na Mgbasa Ozi
Ịgba chaa chaa & Ịgba chaa chaa
Akụkọ & Akụkọ
21.5 inch Ezi Flat Touch Signage
TouchDisplays multifunctional Touch Interactive Digital Signage na-ewepụta ikpo okwu dabere Windows ma ọ bụ gam akporo.Na ọkpụrụkpụ ahaziri ahazi ọ na-enye ngwaahịa ọkwa azụmahịa.Atụmatụ multi touch na VESA ugwu na-eme ka ọ zute ebumnuche dị iche iche, iko dị ọkụ emebere iji guzogide ebe ọrụ dị oke egwu.
TouchDisplays akara ngosi mmekọrịta ejiri ike ọtụtụ ebumnuche pụta.Anyị na-eme kiosks ahaziri ahazi nke arụnyere ma ọ bụ nke ahaziri ọkpụrụkpụ iji dabara kiosks gị.Site na oghere VESA dakọtara, ọ nwekwara ike ịnwe mgbidi ma ọ bụ guzoro n'ala yana ihe nkwado.Rite uru site na nchapụta dị elu nhọrọ ya na akụkụ nlele n'ezie, akara dijitalụ anyị nwere ike ịgụta ìhè anyanwụ.
Ndị na-emepụta ihe na-enweghị ofufe dị oke ike na obere oriri;
Nhọrọ CPU na-agbanwe agbanwe maka ụdị Android dị iche iche;
Nnukwu nso sitere na Intel j1800 ruo i7 ọgbọ nke asaa kachasị ọhụrụ maka windo.
2151E Touch All In One PC na-agba ngwa ngwa ngwa ngwa, na-enyere gị aka ijere ndị ahịa gị ozi ngwa ngwa.
Fanless processor otú obere oriri na a noiseless gburugburu.
Enyere ọtụtụ oghere: HDMI/VGA, USB, Rj45, Mic na ndị ọzọ, ntinye nke ntinye vidiyo na mmepụta na-adị ngwa ma dị mfe.USB nwere ike dị maka njikọ mpaghara ọzọ.
E wezụga ihe ngosi ihuenyo mmetụ dị iche iche PACP dị ike, ọtụtụ akụkụ dị iji zute ụdị ngwa niile, gụnyere nzikọrịta ozi dị nso (NFC/RFID), Mag strip Reader (MSR) ndị na-ebi akwụkwọ thermal na ndị ọzọ.WiFi arụnyere na bluetooth na-eme ka ọ nwee ike ijikọ oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Nke gara aga: Nyochaa ihuenyo mmetụ 19 - Ezi Flat Touch Monitor - Mmetụ aka
Osote: 19 inch Mepee Frame Touch Monitor
TouchDisplays ' Touch IDS (Interactive Digital Signage) site na nkwado nke nwere ahụmahụ dị ukwuu, ike nrụpụta kwụ ọtọ, emebere ya maka ụdị ụlọ ọrụ niile nwere teknụzụ LCD kachasị ọhụrụ iji hụ na ntụkwasị obi dị elu na ahụmịhe onye ọrụ mara mma.
Na-ejikọta kọmpụta mmetụ ihuenyo ọkwa ọkwa azụmahịa yana ihe nrụpụta gam akporo gam akporo na-ebuga ọsọ mgbako na-enweghị atụ.
Na ngwọta ahaziri maka ndị ahịa na-enye nha dị iche iche.
Ihuenyo mmetụ Capacitive atụpụtara
Metụ oge nzaghachi
TFT LCD (ọkụ azụ ọkụ)
Mpaghara ihuenyo bara uru
Mkpebi kacha mma (nwa afọ).
Igwefoto LCD pikselụ
Agba panel LCD
Oge nzaghachi panel LCD
(nke a na-ahụkarị, site na etiti)
± 89° ma ọ bụ 178° ngụkọta (aka ekpe/aka nri)
± 89° ma ọ bụ 178° ngụkọta (elu/ala)
mmepụta njikọ mgbama vidiyo
Obere D-Sub 15-Pin VGA ụdị na HDMI ụdị
usb 2.0*4 (usb 3.0*2 nhọrọ) PCI-E (4G SIM kaadị, wifi na Bluetooth nhọrọ)
Ụdị Nnyefe Ike
Nyochaa ntinye ntinye: + 12VDC ± 5%, 6.0 A;DC Jack (2.5￠)
Ntinye brik AC ruo DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Ike oriri: 50W
(Embed Kọmputa Modul)
ECM4:Intel processor i3-4010U (Dual Core 1.7GHz,Fanless)
SATA3:HDD 500G (ruo 1TB nhọrọ) ma ọ bụ SDD 32G (ihe ruru 128G nhọrọ)
Ebe nchekwa:DDR3 4G (gbatịa ruo 16G Nhọrọ)
nkwalite CPU:J3160 & I3-I7 usoro 5th6th7thnhọrọ
Sistemu eji arụ ọrụ:Win7Pos dị njikere7Win8XPWinCEVistaLinux
ECM9:Cortex-A53 8Core 1.5GHz;GPUIhe: PowerVR G6110
Rom: 1G (ruo 2G4G nhọrọ);Flash: 8G (ruo 32G nhọrọ)
Sistemụ arụmọrụ: 5.1 ma ọ bụ 6.0
Na-arụ ọrụ: 0°C ruo 40°C; Nchekwa -20°C ruo 60°C
iru mmiri (anaghị ekpokọta)
Na-arụ ọrụ: 20% -80%;Nchekwa: 10%-90%
Akụkụ Mbupu Katọn
Ibu (ihe dị ka.)
Ngwaahịa: 5.1 n'arọ (1 Mpekere); Mbupu: 13.2 kg( 2 PCS)
Afọ 3 (Ewezuga panel LCD 1 afọ)
Ndụ oriọna azụ: ihe dị ka awa 50,000 ruo ọkara nchapụta
Nkwenye ụlọ ọrụ
CE / FCC / RoHS (UL ma ọ bụ GS maka ahaziri)
75 mm na 100 mm ugwu VESA
Ihe nrịbama dijitalụ mmekọrịta
Igwe ọkụ eletrik na-emekọrịta ihe
Onye na-emepụta ihe ngwọta smart touch
Ime ụlọ C602, ụlọ A, No.898 Baicao Road, Chengdu, Sichuan, PR.China
Nweta ozi zuru ezu
Soro ka ị nweta nkwalite kachasị ọhụrụ
Ngwaahịa egosipụtara, map saịtị Igwe gam akporo Pos, Niile na One Touch Screen Pos, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Pos Machine, Niile N'otu Pos, Sistemu Ọrịre, Pos Machine niile n'otu,